Kumanaan Dad ah oo ka barakacaya Gudaha wadanka Nigeria – SBC
Kumanaan Dad ah oo ka barakacaya Gudaha wadanka Nigeria
Waxaa wadanka Nigeira si aad ah uga barakacaya 24-kii saac ee la soo dhaafa kumanaan dad ah oo ku noolaa deegaanada woqooyi bari ee wadanka Nigeria kuwaasi oo ka carararay dagaalada diimaha ku saleysan ee deegaanadaas ka curtay.
Barkaca ka socda Wadanka Nigeria aya a waxaa uu imaanayaa xilli maalmihii la soo dhaafay weeraro isdaba jog ah oo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen 29 qof oo badankood ah dadka Kirishtaanka ah ee wadankaasi ku dhaqan.
Deegaanada laga barakacayo waxaa ka mid ah gobolka Adamawa halkaasi oo ay ka dhaceen weeraro lagu bartilmaameedsanayo goobaha ay ku cibaadeystaan dadka kirishtaanka ah ee wadankaasi ku dhaqan.
Kooxda Islaamiga ah ee Boko Haram ayaa horey u sheegatay inay masuul ka tahay weerarada isdabajooga ah ee wadankasi ka dhacay iyada oo weeraradaasi sheegtay ujeedkooda inuu yahay in dadka diinta Kirishtanka haysta inay iskaga tagaan deegaanada waqooyi ee wadanka oo ay ku xoogan yihiin muslimiinta.
Barakaca iyo xiisada ka taagan wadanka Nigeria waxay ku soo beegmeysaa xilli todbaadkii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha wadankaasi Goodluck Jonathan uu ku dhawaaqay in gobolada xiisaduhu ka jiraan lagu soo rogay Xaalad degdeg ah si wax looga qabto dagaalada soo laablaabtay ee u dhaxeeya Muslimiinta iyo Kirishtaanka kuwada nool dalkaasi.
Kooxda Boho Haram oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ka dagaalameysay wadanka Nigeria waxay dileen sannadihii la so dhaafay dad ka badan 500 oo badan dad aan muslim ahayn.